Hlola i-Kolkata, India - World Tourism Portal
Hlola i-Kolkata, India
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu e-Kolkata, India
Ongakwenza eKolkata, eNdiya.
Amawebhusayithi ezokuvakasha asemthethweni eKolkata
Bukela ividiyo ngeKolkata
(Ngaphambili iCalcutta) inhloko-dolobha yaseWest Bengal nedolobha lesibili ngobukhulu kulo India (emva Mumbai). Hlola i-Kolkata, idolobha 'elisebusweni bakho' elishaqisa futhi lihehe isivakashi esingalindele. Ubuphofu obuhlukumezekile buhlangana ngokungenakuphikiswa namagugu aseBrithani ayaphithizela, izingadi ezihlakazekile namakholeji omlando. Yaziwa kudala njengenhloko-dolobha yezamasiko eNdiya, iKolkata iyaqhubeka nokuthola izizukulwane zezimbongi, ababhali, abakhiqizi bamafilimu nalabo abawine umklomelo weNobel. Uma uhambo lwakho lukuvumela kuphela ukuvakasha kwedolobha elilodwa noma amabili amadolobha amakhulu aseNdiya, ke nakanjani ucabangele ukubeka iKolkata ohambweni lwakho. Yithande noma uyizonde, nakanjani awuzowukhohlwa lo muzi ku-Hooghly.
IKolkata ine sezulu esishisayo nesomile esishisayo. Kuhlala kufudumele unyaka wonke, futhi amazinga okushisa aphakeme aqala ukusuka ku-27 ° C ngoDisemba nangoJanuwari kuya cishe ku-38 ° C ngo-Ephreli noMeyi.
Ukuba seBengal, ulimi lwendabuko lwabantu baseKakkata isiBengali. Kodwa-ke, iningi labantu abafundile bakhuluma isiHindi nesiNgisi futhi, futhi abanye abaningi bangaba nomyalo oyisisekelo wesiNgisi.
Thatha uhambo ngomfula. Kukhona i-promenade enhle eduze nase-Edeni Engadini.
Thatha umugqa wokukhumbula phansi wePrincep ghat.
Thatha ukuhamba ngesikebhe ezikebheni ezincane ngaphansi kwesibhakabhaka esineenkanyezi e-Outram Ghat.
Kunamabhinema amaningana anamuhla azungezwe idolobha, kufaka phakathi i-INOX ePorum Shopping Mall kanye neCity Center eSalt Lake, 89 Cinemas at Swabhumi near Salt Lake City and Fame at Metropolis Mall in Highland Park, RDB Adlabs at RDB Boulevard, Near infinity Building ku-Sector 5, eSaltlake, konke kubonisa ama-blockbusters aseNdiya naseMelika.
INandan, 1 / 1 AJC Bose Road, (empumalanga yesiteshi sikaMasipala waseRabindra Sadan). Uphawu lobuciko namasiko edolobheni nendawo yeKolkata Film Festival njalo ngoNovemba.
IKolkata Book Fair yenzeka ngesonto eledlule likaJanuwari kuya ngesonto lokuqala likaFebhuwari. Lesi yisilo sencwadi esikhulu kunazo zonke e-Asia futhi umcimbi omkhulu edolobheni.
UDurga Puja, umkhosi ohlonipha unkulunkulukazi wamaHindu uDurga, wenzeka ngo-Okthoba. Umkhosi omkhulu kakhulu wamaHindu eBengal naseMpumalanga India, I-Kolkata ithatha i-carnival ecishe ifane ne-ambiance. Imigwaqo ivaliwe lapho kwakhiwa imidlwane, iziteji ezinkulu ezibonisa imicimbi nezindikimba ezikhulukazi kusukela ezinganekwaneni ziye kubuciko besimanjemanje kuya ekuqwashisweni kwezenhlalo kuya kwisayensi kuya kwezombusazwe kuya kusiqubulo sezindaba zakamuva zezwe / zamazwe omhlaba futhi zisebenza ngokungaphezulu komcabango. Vula amahora we-24 ngalezozinsuku ze-10, izixuku ezinkulu ziyaxhuma kusuka ezigodini eziseduze kuya kwezikhulu kakhulu nezingcono kakhulu. Isikhathi esihle sokuvakashela i-Kolkata (ngaphandle kokuthi wesabe izixuku!).
IKolkata yisikhungo esibalulekile sokuhweba ngemisebenzi yezandla eyenziwe eMpumalanga India. Amahhashi e-Bankura, ama-saris avela eShantiniketan, kanye nezimpahla zesikhumba phezulu ohlwini lwezinto ezikhethekile zeKolkata. Yaziwa nangokuthi ngama-rasgollas kanye nethini noma amabili njengesipho sabantu ekhaya. IMakethe eNtsha kungenzeka iyindawo edume kunazo zonke ukuyothenga kodwa kunezindawo ezisendalini kuyo yonke indawo.
ISouth City Mall (eduzane naseJadavpur Police Stn)
IMetropolis Mall (eduzane neHighland Park)
Isikhungo Sasedolobheni (I-saltlake)
Isikhungo Sedolobha 2 (Idolobha elisha)
Isitolo esikhulu seMani Square (EM Bypass)
IMetro Plaza (eduzane neNxusa laseBrithani)
I-Orchid Point (Kankurgachi)
IShakre Arcade (iMakethe entsha)
Ukufuna Izitolo (Ipaki Circus)
I-Acropolis Mall (Isixhumi seRashbehari)
IKolkata yayidume ngokuba nezindawo zokudlela ezinhle kakhulu kunangaphambili ngaphambi kokuba amaNdiya akwamanye amadolobha afunde ukudla ngaphandle. Izindawo eziningi zokudlela ezilandela imigwaqo endaweni yase-Esplanade sekuphele iminyaka engaphezu kwekhulu (ngeshwa, eziningi zibonisa iminyaka yazo!).
Kepha injabulo yokudla eKakkata ekudleni kwayo kwaseNdiya. Abathengisi basemgwaqweni abathengisa ama-egg roll / rolls yenkukhu baningi futhi imiqingo yabo esanda kulungiswa ye-kati iphephile ukuba idliwe futhi ikujabulele. I-Mughali Paratha (iparatha eligcwele inyama egayiwe) iyindlela ekhethekile yaseCalcutta futhi itholakala 'kumakhabethe' ahlukahlukene kuChowringhee Road. 'AmaChops', uhlobo lwebhola elijulile elithosiwe eligcinwe nge-beet kanye nama-veggies kungenye into ongeke uyithole kwenye indawo emhlabeni. IPuchkas, uhlobo lweCalcutta lwe-paani-puri, luyatholakala emigwaqweni kodwa uqaphele amanzi!
Amaswidi ama-Bengali adumile kulo lonke elaseNdiya. I-Rasagolla (amabhola we-shizi afakwe kusiraphu yeshukela), iPantua - ukuhlukahluka okuthosiwe okufanayo, iRosomalai- amabhola ushizi afanayo aminywe ubisi olunoshukela olunoshukela, uMishti Doi (i-yogurt emnandi), iSandesh (ukuhlukahluka okuningana).
IKolkata futhi iyikhaya lokudla kwase-Indian Chinese (manje okungenwa ezindaweni ezikude kakhulu) I-New York!). Izindawo zokudlela zamaShayina zikuyo yonke indawo ngakho-ke zama ukwahluka kwamaNdiya kwesobho elishisayo nelomuncu kanye nesitsha esidumile samaChinese senkukhu yenkukhu.
Ukudla kwaseBangali kugxile kwezinhlanzi. I-Macher jhol, inhlanzi yangempela ku-curry gravy, iyinhlanzi enamanzi etholakala yonke indawo futhi ihamba kahle nelayisi, kepha iBangalis yonke indawo ifunga inhlanzi ye-hilsa (ukuhlukahluka kwesithunzi). UHilsa, omfushane kancane oswele lwesinaphi futhi ophekwe phezulu kukhona izitsha zezinhlanzi ezinhle kakhulu emhlabeni.
Okukhethekile yile fillet engenacala yeHilsa Fish, eshaye emgqonyeni we-bannana futhi ikhonzwa no-Mustard Gravy. Ukudalulwa okuningi, ama-yuppies namaKorkattans acebile. Ukudla kukhulu, yize kungqubuzana nezindleko ezibizayo, kanti izingxenye ezithile ezincane. Kwenzelwe ukuvakasha kusihlwa okuthokozisayo, okuhambisana nengxoxo yesiBengali engapheli, isimilo seKolkatta.
Umuntu kufanele azame ukunambitheka kokunyakaziswa kobisi olubandayo nokunambitheka okukhethiwe kweGreen Mango, iRose, iVanilla, neCoconut Water (endaweni yakini ebizwa nge-DAAB).
IKolkata ine-plethora yama-pubs nemigoqo, okuvame kakhulu ngayo yizixuku ze-hip ezintsha kanye nabahlali bayo asebekhulile. Amanye ama-pubs anamakhonsathi abukhoma noma ama-DJs.
Kunenqwaba yamakhofi e-intanethi avele kuwo wonke ama-nook nasegumbini ledolobha.
Ukufakwa kwezingcingo komakhalekhukhwini edolobheni kuhle kakhulu. Baningi abahlinzeka ngezinsizakalo abanikezela ngezinhlelo ezahlukahlukene.
IKolkata iphephile ngokunengqondo, futhi iningi labantu linomusa futhi liwusizo kunakwamanye amadolobha amakhulu aseNdiya. Inkinga eyodwa eyaziwayo abathengisa izidakamizwa ezungeze iSudder Street. Kodwa-ke, njengoba abathengisi ngokusobala bengafuni ukudonsela ukunaka okungafanele emsebenzini wabo, ngokuvamile abaphikeli futhi akuwona usongo.
IVishnupur - idume ngamathempeli we-terra cotta, iziqophamlando zobumba, kanye nosilika besilika
ISantiniketan - idume ngesikole i-Ashramik, neyunivesithi eyasungulwa yimbongi kaNobel Laureate uRabindranath Tagore. leli dolobha laziwa nangobungcweti besikhumba sokwenza ngesandla nangezikebhe ze-kantha
ENyakatho Bengal - indawo esezintabeni eDarjeeling, Jalpaiguri, Lava-Lolegaon, futhi, naseningizimu emathafeni aseGangetic, izifunda ezingokomlando zaseMalda naseMurshidabad.
Phuentsholing - Amabhasi kaHulumeni waseBhutan aya kuleli dolobha elisemngceleni waseBhutan asuka Esplanade Bus Station e-7PM ngoLwesibili, uLwesine nangoMgqibelo. Uhambo luthatha cishe amahora we-18. Amabhasi ahamba kahle, kepha imigwaqo enqamula eNtshonalanga Bengal igcwele izimbobo zezimbiza, ngakho-ke ungagcini ngokuthola ubuthongo obuningi osendleleni.
ISundarbans National Park - Ingxenye yemikhonto emikhulu ebomvu emhlabeni, kanye nasekhaya kumaBengal Tiger adumile
Amabhishi - Ingxenye eseningizimu yombuso isingatha amadolobha asolwandle amaningi njengeDigha, Shankarpur, Tajpur, Junput neMandarmani. Thatha imoto noma ibhasi elihamba njalo lisuka e-Esplanade liye kulamabhishi asolwandle.